Japon ~ Journey-Assist - Mahaliana any Japon. Kolontsaina, laisoa ...
Japana dia trano fitehirizam-be na exotic endri-javatra mahafinaritra. Betsaka ny zavatra mahaliana: Tokyo maoderina maoderina, faritany miloko marevaka, tampon-dranona misy felana, voninkazo sakura, torapasika any Okinawa, tsangambato Shinto taloha.
Any Japana, ny fomba nentim-paharazana dia mifangaro amin'ny fomba maoderina. Manakaiky ny pagodas taloha sy ny vavahadin'ny fanahy no ahitanao ireo skyscrapers mirrated, "dimy kintana" marevaka, efitrano azo antoka, mandro ofuro japoney. Miaraka amin'ny fangaro mampitolagaga ny lova avy any atsinanana sy ny fandrosoana tandrefana izay manintona mpizaha tany i Japana.
Ho fanampin'ny rivo-piainana manokana dia misy ny maritrano manokana tany am-boalohany, nasehon'izy ireo, indrindra indrindra, ilay "Ilay hoe Golden Pavilion", ny lapan'ny emperora ary ireo tempoly maro be. Ho liana amin'ny valan-javakanto mahaliana toy ny Disneyland sy Universal ny ankizy.
Ny fizahan-tany tonga any Japon dia samy hafa be, nefa matetika dia tsara. Matetika dia olona ireo izay efa nitsidika firenena maro, sy solontenan'ny orinasa.
Ny tsy fatiantoka lehibe any Japana ho an'ny mpandeha dia ny tahan'ny avo be, raha tsy misy vanim-potoana "tsy mpizahatany" eto. Na izany aza, be dia be ny mpizaha tany sy ny fialamboly eto amin'ity firenena ity.
Ny fiarahamonina Japoney dia aseho amin'ny alàlan'ny fahatsapana mazava ananan'ny sokajy sosialy, toy ny - Fianakaviana, Tarika Asa, Vondron'olona mpianatra ary ny hafa. Izy io dia manana taratry ny saina mazava ao amin'ireo fifamatorana ao anatin'ireo kilasy sy fiarahamonina ity.
Ny zava-dehibe indrindra ao Japana dia ny foto-kevitra toy ny "adidy", "adidy", antsoina hoe "lanja".
Japana (afa-tsy i Hokkaido) dia firenena manana karazana toetrandro. Eto, tahaka anay, ny fizarana 4 dia mazava tsara.
Ao koa ny vanim-potoana orana mivatravatra any Japon - ny fahavaratra sy ny fararano. Amin'ny ririnina, amin'ny faritany lemaka akaikin'ny morontsiraka, ny mari-pana matetika, tsara ny masoandro, mamirapiratra ny masoandro, maina ny rivotra.
Manomboka amin'ny vanim-potoanan'ny orana ny fahavaratra izay antsoin'ny Japoney hoe "bai". Maharitra 3 ka hatramin'ny 4 herinandro izany. Any atsimon'i Okinawa, ny bai dia manomboka amin'ny taonjato faharoa Mey, ary any amin'ny faritr'i Tohoku (avaratr'i Honshu) tamin'ny taona faharoa ny volana jona, ary mifarana amin'ny taona faharoa tamin'ny volana jona sy Jolay. Jolay ny fiandohan'ny hafanana amin'ny fahavaratra. Amin ny fararano dia somary rivotra, fa ny mari-pana dia mahazo aina (tsy mafana loatra ary tsy mangatsiaka loatra).
Ny sandam-pirenena dia ny yen. Amin'ny fomba ofisialy, 1 yen mizara ho 100 sen, fa raha ny tena izy dia tsy nampiasaina hatoriana ela. Eo am-pamitana dia misy tsikera ao amin'ny fanondroana 1, 000, 2000 ary 5 yen, ary koa vola madinika anaram-boninahitra ny 000, 10, 000, 1, 5 ary 10 yen. Mahagaga fa misy ihany koa ny anaram-piangonana 50 yen, na izany aza dia tsy fahita firy ary saika tsy ahitam-bokatra mihintsy.
Misy fetrany ao amin'ny hotely - fifanakalozana tsy mihoatra ny 300 dolara amerikana isaky ny olona iray mandritra ny 1 andro. Any amin'ireo banky, io fomba fiasa io dia sarotra amin'ny fahasahiranana birao tsy ilaina. Mandritra izany fotoana izany, ny tahan'ny eny amin'ny seranam-piaramanidina dia mitovy amin'ny any amin'ny toerana hafa (na ny tsy fitoviana dia toa tsy takatra mihitsy).
Ny faritany varotra lehibe ao Tokyo dia Shinjuku sy Shibuya. Ny kojakoja fivarotana japoney dia manaitra amin'ny habeny. Ny foibe fivarotana lehibe amin'ity firenena ity dia Seibu, Mitsukoshi, Isetan, Matsuya, Keio. Hita any Tokyo amin'ny faritr'i Shinjuku sy Ginza izy ireo. Niasa hatramin'ny 8 ka hatramin'ny 21 izy ireo.
Any Tokyo, ny firavaka sy ny firavaka dia tsara. Tsy mora kokoa noho izy ireo ny any Eoropa, fa ny fananganana azy ireo kosa manamarina izany. Ny vokatra voahangy dia azo vidy ao amin'ny Galeri an'ny Tasaki. Manome fitaovana betsaka amin'ny fitaovana hafa izy io. Sarotra ny mahita satroka toy ny akanjo, fonon-tanana, scar, socks, sns ... Na aiza na aiza amin'ny ankapobeny, ny Japoney amin'ny ankapobeny dia azo antsoina hoe mpanome fitaovana.
Tsy toy ny firenena hafa any Azia, tsy fanao any amin'ny bazaha sy ny fivarotana any Japon ny fangatahana entana. Mpanao lamaody eoropeana maro no manolotra ny fivoriany vaovao any Tokyo. Azonao atao koa ny mividy souvenir eny amin'ny seranam-piaramanidina - ny vidiny dia mitovy ho an'ny tanàna.
Ny tena malaza amin'ireo dia ny vary, ahitra ary trondro. Ny lovia mahazatra indrindra dia ny "sushi" (nantsoina hoe "sushi" amin'ny teny Rosiana; misy karazany 200 mahery izy ireo); "Sashimi" - dia trondro manta amin'ny endrika atody izay nasiana saosy soja sy saosy horseradish maora-kena; "Sukiyaki" (henan'omby); lovia samy hafa avy amin'ny legioma; «Tofu» - sojaza. Amin'ny ankapobeny, ny soy dia vokatra iray tena malaza amin'ny fandrahoan-tsakafo Japoney.
Ny sakafo be mpitia ao Japana dia misy henan'omby sy sahirana, zava-pisotro misy alikaola izay azo avy amin'ny vary izay misy hery 16 ka hatramin'ny 19 degre. Ny lasopy japoney dia antsoina hoe miso. Ny ampahan-drà misy azy dia ahitana ny lasopy trondro sy ny soja fermé soja, ary ny tapany kosa dia misy ny holatra, algae, trondro, tofu ary hena. Ny lovia trondro malaza dia tempura, izay sombin-trondro izay andrahoina amin'ny menaka mangotraka amin'ny vilany. Ny kisoa dia ampiasaina amin'ny fanaovana "tonkatsu" - mofo. Avy amin'ny akoho - "yakitori" - kebabs kely.
Any amin'ireo tanànan'ny Japoney dia afaka mahita sakafo be dia be ianao amin'ny vidiny mirary - ohatra, ny mpangalatra 300 350 ary milkshakes avy amin'ny 700 yen. Any amin'ny trano fisakafoanana tsy mora vidy, mitentina 4 yen ny saran-misakafo atoandro. Sakafo hariva miaraka amin'ny làlan-kianja lehibe, alikaola sy salady amin'ny trano fisakafoanana antonony eo amin'ny 000 yen.
Ny orinasam-pitaterana an-dalambe dia antsoina hoe Japan Rail. Ity orinasam-barotra ity dia manana ny tsipika fiaran-dalamby haingam-pandeha Shinkansen sy ny tambajotra amin'ny lalamby nasionaly. Ny zotra dia mizara ho karazan'olona maro - "Tokkyu" (fiaran-dalamby haingana indrindra), "Kyuko" (fiaran-dalamby kokoa), "Kaisoku" (na fiaran-tsofina aza) ary "Futsu" (fiaran-dalamby mahazatra). Ny tsirairay amin'ireo garan-dalamby lehibe amin'ny faritry ny renivohitra dia hita ao amin'ny tsipika Yamanote peratra. Ny fiaran-dalamby dia manana ny fitaovana rehetra - seza mora, milina mivarotra ho an'ny kafe sy zava-pisotro mamy, trano fidiovana, fampisehoana amin'ny teny anglisy sy Japoney.
Ny fiara fitateram-bahoaka dia novolavolaina tsara ao an-tanànan'ny Japoney. Ny ankamaroan'ny fiara dia mihazakazaka hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 21, ny sasany manomboka amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 23. Amin'ny fijanonana rehetra dia misy famantarana manondro ny anaran'ilay fijanonana sy ny làlan-dàlana, fa amin'ny ankamaroan'ny fijanonana dia natao manokana amin'ny fiteny japoney izy ireo. Ny fandoavana ny fitsangatsanganana eto dia tanterahina alohan'ny handehanany, ary tsy mandritra ny fidirana amin'ny fiara fitateram-bahoaka.
Ny hetsika fiaran-dalamby dia tanterahina miaraka amin'ny halavirana dimy minitra 5 ka hatramin'ny 00:00. Ny saran-dalana dia voafaritra amin'ny alàlan'ny làlana ary eo anelanelan'ny 120 ka hatramin'ny 1 yen. Lamina amin'ny lamina samihafa ny lamasinina, ny andalana tsirairay dia manana ny lokony ihany. Manana seza fotsy volo ny fiara ho an'ireo sembana sy zokiolona.
Voankazo Bali. fizaran-taona
Kolontsaina, Fivavahana, fialantsasatra ary filozofianan'i Thailand
Jeografia, seranam-piaramanidina any Thailandy